Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Wararka Sri Lanka » Sri Lanka waxay ku socotaa xiritaan cusub iyadoo dhimashada COVID ay kor u kacayso
Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • Wararka Dowladda • Caafimaadka Warka • Warshadaha Warshadaha • News • Dadka • Dib-u-dhiska • Waajib ah • Ammaanka • Wararka Sri Lanka • Dalxiiska • Warka Safarka Safarka • Daalacanayo Hadda • Wararka kala duwan
Wadammada jasiiraddu waxay ku qasbanaadeen inay qaadaan tillaabooyin adag si loo xakameeyo faafitaanka coronavirus, maaddaama cudurrada iyo dhimashada sii kordheysa ay buux dhaafiyeen isbitaallada Sri Lanka, meydadka iyo meydadka meydadka.
Sri Lanka waxay ku dhawaaqday xiritaan cusub oo 10 maalmood ah.
Kiisaska cusub ee Sri Lanka ee COVID-19 iyo dhimashada ayaa sare u kacday.
Faafida dabaysha ayaa buux dhaafisay isbitaalada Sri Lanka iyo meydadka.
Sri Lanka waxaa lagu qasbay inay u sujuuddo cadaadis xoog leh oo ka yimid khubaro caafimaad kadib markii ay diiwaangelisay dhimashadeedii ugu badneyd ee maalin keliya COVID-19 oo ah 187 iyo 3,793 xaaladood oo cusub Arbacadii waxayna ku dhawaaqday xiritaan 10 maalmood ah oo bilaabanaya caawa.
Sri Lanka waxay soo sheegtay wadar ahaan 372,079 caabuq tan iyo bilowgii cudurka dillaacay sanadkii hore, iyadoo 6,604 ay u dhinteen. Khubarada caafimaadka ayaa sheegaya in tirada dhabta ah ay ahayd ugu yaraan laba jibaar.
“Qufulka Qaranka oo dhan wuxuu dhaqan galayaa laga bilaabo 10ka fiidnimo ee maanta (Ogosto 20) ilaa Isniinta (30ka Ogosto). Dhammaan adeegyada muhiimka ahi waxay u shaqayn doonaan si caadi ah, ” Wasiirka Caafimaadka Keheliya Rambukwella ayaa sidaa ku sheegtay Twitter -ka.
Wasiir -ku -xigeenka caafimaadka, Channa Jayasumana, ayaa ku tilmaamay kala duwanaanshaha Delta ee fayraska "bam xoog leh oo ku qarxay Colombo oo ku faafay meel kale".
Xirfadlayaasha caafimaadka, hoggaamiyeyaasha diinta, siyaasiyiinta iyo ganacsatada ayaa ku baaqay in si degdeg ah dalka oo dhan looga xiro si loo xakameeyo faafitaanka cudurrada.
Iyagoo ka digaya in isbitaallada iyo meydadka ay gaarayaan awoodooda ugu sarreysa, dhakhaatiirta iyo ururada shaqaalaha ayaa si isdaba joog ah ugu boorriyay dowladda inay soo rogto xannibaad.
Dowladda Sri Lankan ayaa dib u dhigaysay tallaabadaas, iyada oo tixraacaysa dhaqaalaha liita.
Cudurrada maalinlaha ah ee Sri Lanka ayaa ka badan labanlaabmay bil gudaheed celcelis ahaan 3,897.
Isbitaalada dalka oo ay ku nool yihiin 21 milyan oo qof ayaa buux dhaafiyey bukaannada COVID-19 maaddaama kala duwanaanshaha Delta ee aadka loo kala gudbin karo uu ku sii kordhayo dadweynaha.
Xayiraadyo badan ayaa durbaba jira, iyadoo la xiray iskuulada, jimicsiyada iyo barkadaha dabaasha oo la mamnuucay aroosyada iyo bandhigyada muusikada. Mas'uuliyiinta ayaa sidoo kale soo rogay bandow habeenkii laga bilaabo Isniinta, taasoo xaddideysa dhaqdhaqaaqa laga bilaabo 10 -ka fiidnimo ilaa 4 -ta subaxnimo maalin kasta.
Mawjadda saddexaad ee cudurrada Sri Lanka ayaa lagu eedeeyay xafladaha Sinhala iyo Tamil Sannadka Cusub ee badhtamihii Abriil.
Kadib a xidhitaan muddo bil ah, dawladdu waxay dib u furtay waddanka bishii Juun iyada oo ku tiirsan olole xoog leh oo tallaal ah oo ah istaraatiijiyadeeda ugu weyn ee lagula tacaali karo fiditaanka.
Qiyaastii rubuc ka mid ah dadka Sri Lanka ayaa si buuxda loo tallaaley, badidoodana waxay qaateen tallaalka Sinopharm ee Shiinaha.
Sri Lanka ayaa sidoo kale ansixisay Pfizer, Moderna, AstraZeneca iyo Sputnik V ee Russia.
In kasta oo in ka badan shan milyan oo ka mid ah 21 milyan oo qof ay heleen laba qiyaasood oo tallaal ah, haddana fayrasku wuxuu ku dhacay dad badan oo ka baxsan awoodda isbitaallada dawladda iyo kuwa gaarka loo leeyahay.